सवैलाई रूवाउने कहालि लाग्दाे झापा घटना – Paluwa Khabar
कार्तिक ६, २०७७ बिहिबार 62
काठमाडौ कार्तिक ६ । झापामा निकै नै कहालीलाग्दो घटना भएको छ । कन्काई नगरपालिका ३ मा कहालीलाग्दो घटना भएको हो । २१ वर्षको उमेरमै एक किशोरीको सिन्दुर पुछिएको छ भने सानी छोरी टुहुरी भएकी छन् ।
२३ वर्षका युवा अभिषेक चौधरीलाई उनकै साथीहरुले ज्यान लिएका छन् । २१ वर्षको उमेरमै सिन्दुर बनेकी युवतीको ३ वर्षकी सानी छोरी छन् । झापा सुरुगाँमा साथीहरुले नै ज्या’न लिएपछि अहिले उनको घरमा शोक छाएको छ ।घटना भएको अघिल्लो दिन साथीसंग हाँसिखुसी घरवाट निस्केका थिए । उनी कामवाट फर्केर आएपछि उनले नै चलाउने साइकल लिएर अभिषेक एक जना साथीसंगै गएका थिए । खाना पकाएर सकेपछि पनि श्रीमान घर नआएपछि उनले फोन गर्दा फोन पनि लागेन ।
त्यसपछि उनी खोज्न निस्किइन् राती ११ वजे सम्म पनि उनी फेला परेनन् । जुन साथीसंग निस्किएका थिए उनकै घरमा जाँदा ति साथी पनि घरमा पुगेका थिएनन् । दुईजना साथी कतैघुम्न गए होलान् भन्ने सोचेर उनी घर फर्केर आएर बसिन् । राती करिब १ वजे दुई जना साथी अभिषेक भन्दै बोलाउन आए । उनीहरुले राती पानी खान मागेर र खान दिए पछि उनीहरु गएका थिए । तर भोलीपल्ट आफ्नो श्रीमानको नि’धन भएको आफुले थाहा पाएको बताइन् । भोलीपल्ट त्यो साथी घरका सबै परिवारलाई सखाप पार्ने उद्देश्यले आएको आफुले थाहा पाएको बताइन् । उसले त्यस्तो भनेको रहेछ, भोलीपल्ट थाहा पाएपछि मलाई निकै डर लाग्यो । राती पानी खान मागेको बेलामा ढोका खोलेको भए सबैलाई सक्ने रहेछ । रविन राजवंशिसंगै आएका अर्का साथीलाई भने प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै उनले गुनासो गरेकी छन् ।
रविनले सबैलाई सिध्याउँछु भनेर अर्को साथीलाई लिएर आएको थियो भनेपछि त्यो साथीलाई पनि केही सल्लाह भएको हुनुपर्ने तर प्रहरीले उनलाई किन छोड्यो ? उनको भनाई छ । सानी छोरीले बाबा कहाँ जानुभयो ? भनेर सोध्दा के जवाफ दिने ? उनले आँशु झार्दै भनिन् ।
Prevसितलाबजारकाे मास्क बैकलाई मदन भण्डारि फाउण्डेसनका सचिवकाे सहयाेग
Nextगुलरियाा नगरपालिका प्रमुखकाे शुभकामना
त्यस’पछि निता’को मृ’त्यु भयो
अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ओलीले बादललाई बनाए बागमती प्रदेश इन्चार्ज
लाईभ कार्यकर्ममै भाषण गर्दागर्दै नारायणकाजीले तपाई चुप लाग्नुस् भन्दै मञ्चवाटै थर्काए ऋषि धमलालाई (भिडियो)
खासमा बाहुन क्षत्रीमाथी अ’ न्याय छ : उपाध्याय